Indlela yokubopha iCanoe okanye iKayak kwiRack Roof
Nabani na okhwela i- kayak okanye i- kanoe kufuneka abe neendlela zokuzithumela kuye nasemanzini. Abafakeli baninzi banalo ngqondweni engqondweni xa bethenga isithuthi.
Ngoxa iinqanawa kunye ne-kayak ephahleni zidibanisa ziyakwazi ukulungelelaniswa nayiphi na imoto, iloli okanye i-SUV, abanye abavelisi benza kube lula kunabanye. Eli khokelo linyathelo-nenyathelo liza kuchaza indlela yokukhusela iinqanawa okanye i-kayak efakini efakwe okanye emva kokuphawula kwiphahla.
Nangona kukho izikhonkco ezininzi ezikhoyo ezikhoyo ukunceda izikebhe zokuthutha, indlela yokubethelela eluphahleni ayiguquki. Oku kungenxa yokuba yindawo ye-kayak kwaye akusiyo indawo yokubamba iqhosha elitshintshayo.
Xa ungathandabuzeki, soloko uqhagamshelana nencwadi yokufundisa eyayihamba kunye nemoto okanye iphahla lakho.
Beka i-Kayak i-Straps phezu kweBhari yeRack Roof
I-Kayak Roof Rack Isinyathelo soku-1: Beka iingcambu phezu kweengcingo zeplanga. Ifoto © nguGeorge E. Sayour
Isinyathelo sokuqala ekukhonkeleni isikebhe sakho okanye kayake ukuya emotweni yakho ubeka iibhande phezu kwebhayi nganye. Ngokuqinisekileyo, uya kufuna ukuqinisekisa ukuba iinqununu ekupheleni kweemfestile musa ukukhangela umnyango wakho wemoto.
Xhawula umtya ngamnye ngaphantsi kwinqanaba ngalinye kwaye uvumele i-kayak ibambe iqhosha elibhekiselele kwisithuthi sakho.
Ngokuqhelekileyo, iinqanawa ezinamabhobho ziphelile zimbini: enye enesigxina sensimbi okanye i-clamp enye engenalo. Ukuze ugweme ukulimaza ipeyinti, uphumle ngokucophelela ekupheleni kwesicatshulwa kwi window uze uvumele ukuphela kwesinyithi ukuxhoma ixesha elide emzimbeni wemoto.
Ukuba awuzange wenze njalo, yinto efanelekileyo ngolu nqaku ukujonga iingqamlezo ze-kayak. Qinisekisa ukuba ayilula kwaye ukuba ngaba kunjalo, bazinzile. I-rack ngayinye iya kuhluka kodwa ininzi idinga i-allen wrench (ithuluzi elifanelekileyo kwi-gear padling gear).
Indlela yokubeka iKayak okanye iCanoe kwiRack Roof
I-Kayak Roof Rack Isinyathelo 2: Beka i-kayak kwisithuthi. Ifoto © nguGeorge E. Sayour
Ngoku, lungele ukubeka i-kayak ephahleni. Ezi nyathelo zicinga ukuba uhambisa kuphela isikebhe ephahleni lwenqwelo yakho ngexesha, nangona ziyakwazi ukulungelelaniswa nezikebhe ezimbini.
Ukuba udibanisa i-kayak ngokuthe ngqo kwimigqomo yamaplanga, yibeka isikhephe siphezulu. Ukubeka isikhephe seplastiki kwinqanaba lingabangela ukungeniswa kwexesha-ngamanye amaxesha kuthiwa 'i-oil canning'-kwaye ngelixa lingasuswa, liya kuthinta ikhono lakho lokuhamba ngokulandelelana.
Ukuba usebenzisa ii-kayak zithwele okanye izithako ezikhethekileyo ezinjengeengqungquthela okanye i-roller kwi-rack ephahleni, unokubeka indawo ye-kayak.
Ukuze ulwandle okanye ukhenketho lwe-kayak, qiniseka ukuba akukho nto ixhomekeke kwi-deck eyokwenza kwaye ilonakalise uphahla lwemoto. Iintambo eziphosa emoyeni ziyakunxiba ukupenda kwinqwelo yakho kunye neentsimbi zakho kufuneka zikhuseleke.
Ingaba iinqanawa zakho zingcono xa zijongene nephambi okanye zangaphambili ziya kuxhomekeka kwihlobo le-kayak. Ezinye i-kayaks zasolwandle zininzi kakhulu kwi-bow-yindlela abahamba ngayo emanzini-kwaye uza kufumana i-gas engcono engabonakaliyo. I-kayaks zokuzonwabisa zihlala zichazwe kangangoko ukusuka phambili ukuya ngasemva, ukuze uhambe naluphi na uhlobo.
Zama ukubeka i-whitewater kayaks ngasemva uze uphakamise i-cockpit edibanisa ngaphakathi ngaphakathi kwe-crossbar. Uxinzelelo lwomoya ovela emoyeni ngokumelene ne-kayak luya kugcina i-kayak iqhutywe phezulu.
Xa ubeka ibhentshi kwindawo ephahleni, kufuneka ubekwe kwiindawo eziphambili zokuhambisa ubunzima.
Yenza iCanoe ihlasele iCanoe
I-Kayak Roof Rack Isinyathelo sesi-3: Misela iintambo kwi-kayak okanye kwisikebhe. Ifoto © nguGeorge E. Sayour
Emva kokuba isikebhe siphezu kwepaka kunye neengcambu zijikeleze imivalo, zitsala iimbopho ngapha kweqhekeza okanye kwi-kayak ukuya ngaphesheya kwendawo yokupaka ukuze uphephe umonakalo wemoto okanye kwindidi ephukile. Kungenokuba nzima ukuba uqhuke umkhombe phezu kwesinqanawa esikhulu, kodwa ukwenza oku ngokufanelekileyo kulungele umzamo owongezelelweyo.
Ukuba usebenzisa ii-straps ezaneleyo, unokwenza udibanise ukusebenza kunye:
Phonsa ekupheleni kwesibhokhwe (ukuqinisekisa ukuba i-strap ihlala phezu kwe-bar) kwaye uyihamba ngeenxa yokuphela kwesithuthi kunye nesiqhekeza.
Vumela oku kuphepheka ngokukhululekile ngelixa udibanisa kwelinye icala ukuze ufumane ubude obuninzi, uze uphonye ukuphela kwesinyithi ngaphandle kwesiqhekeza.
Unokuzama kwakhona emacaleni omabini omgca ngamnye ngeenxa zonke imoto kunye neenqanawa okanye i-kayak ngexesha elinye. Kungakhathaliseki ukuba yintoni na, inkohliso iya kuba ukufumana i-straps phezu kweenqanawa ngaphandle kokulimaza imoto, isikhephe okanye wena. Ibhizinisi elikhohlakeleyo kwaye uya kufunda ngokukhawuleza indlela efanelekileyo yokusetha kwakho.
Ukukhusela i-Strawberry Kayak
I-Kayak Roof Rack Isinyathelo 4- Yizisa iintambo ezijikeleze iinqamlezo kunye neenqwelo. Ifoto © nguGeorge E. Sayour
Xa i-kayak isesikhundleni esiphakameni sephahla kunye nezikhonkwane zibekwe phezu kwe-kayak sekuyisihlandlo sokuyibamba.
Qinisekisa ukuba iimbopho zibeka iplani ngokubhekiselele kwi-kayak kwaye zingasweleki.
Slayidi nganye i-kayak strap ukuze i-buckle ibhekwe nxamnye ne-kayak.
Yizisa enye iphelo ngaphantsi kwe-crossbar kwaye uphinde uphinde uhlangabezane ne-buckle.
Xhawula i-kayak uxoxe ngebhokisi ngokususa iqhosha kwi-clamp kwaye uvula umtya ukuze udibanise.
Thabatha iimbopho ukuze uthathe i-slack kodwa ungayigxininisi kakhulu kweli nqaku.
Yenza okufanayo kwenye intambo.
Ngoku ukuba iinqwelo ze-kayak zifakwe kwiimfumba zazo, lixesha lokuliqinisa.
Yenza umtya ngamnye phantsi, uvumele iimbopho zidibanise kwi-buckle. Ezi zikhwebu ziyizona zixhobo eziye zivumela ukuba i-straps idibanise enye indlela (ngokuchasene nokuchasene) kodwa kungekhona enye. Ukucima umgca, cima nje iqhosha uze unike iteksi ukuyikhulula.
Ufuna amaqhosha aqinile. Kulungile ukuba ipenki yeplastiki okanye i-kayak ibonakala ixineke kwinkqubo njengoko iya kuphinda ifake ifomu xa ikhululekile. Nangona kunjalo, ukuba ubashiya phezu kophahla ubusuku bakho kwinkampu okanye ehotele, khulisa iimbobo zobusuku uze uzincede ekuseni. Oku kuthatha ezinye zeengcinezelo kwaye zivimbela umonakalo.
Roll and Tie i-Kayak iphosa
I-Kayak Roof Rack Isinyathelo 5- Qalisa kwaye ubophe i-Straps Up. Ifoto © nguGeorge E. Sayour
Ngoku ukuba isikebhe sakho sikhuselekile sithintele kwisithuthi sakho, ixesha lokuya, na? Iphosakeleyo, kukho enye inyathelo lokugqibela. Ukuze ugweme ii-kayak ezinqamlekileyo emoyeni kunye nokubetha imoto yakho, uya kufuneka uzibophe ngandlela-thile.
Indlela eyona ndlela kukugubungela umtya ngamnye ujikeleze kwaye ujikeleze inxalenye yecala lokupakisha elibandakanya emotweni. Emva koko, thabatha isiphelo sesitya kunye neqhina ngokubhekiselele kuwo onke amanqwanqwa okanye udibanise phantsi kwawo.
Musa ukucinga ukuba uya kubalalisa emnyango wemoto ukubenza bangabikho ngaphandle. Oku kuya kuphazamisa nje i-kayak yakho ihamba ngexesha kwaye iya kuguba upende.
Emva kokuba wenze oku, i-kayak yakho kufuneka ikhuseleke, kwaye ulungele ukuya.
Konke Ngegama lesiJapane elithi Kagaku